प्रभाषको ‘साहो’को हिन्दी भर्सनले कति कमायो ? – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
» सहुलियत कर्जा सुविधा ठूला उद्योगीले दिएको सार्वजनिक
» सरकारकै कारण ग्रील व्यवसायीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान पाएनन् : अध्यक्ष कटुवाल
» डोटेली भाकामा ‘मुई डोली भाग २’ सार्वजनिक
» राजस्व सचिब ढुंगानामाथी खनिए व्यवसायीहरु : सस्ता नारा सरकारबाट आजै बन्द गरौ…(भिडियो सहित)
प्रभाषको ‘साहो’को हिन्दी भर्सनले कति कमायो ?
- September 8, 2019 मा प्रकाशित
काठमाडौं । प्रभाष र श्रद्धा कपुर स्टारर् ‘साहो’ले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरिरहेको छ । फिल्म क्रिटिक्सले खासै राम्रो प्रतिक्रिया नदिएपनि ‘साहो’ले दर्शकहरुको राम्रो साथ पाइरहेको छ । ‘साहो’को हिन्दी भर्सनले पनि बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कलेक्शन गरिरहेको छ । बक्स अफिस कलेक्शनको मामलामा यो फिल्मले कयौं रेकर्डहरु आफ्नो बनाइसकेको छ ।
केही दर्शकहरुलाई यो फिल्मको कहानी कन्फ्युजिङ लागेता पनि कहानीमा सस्पेन्स छ । बलिउडमा यो वर्षको सबै भन्दा ठूलो फिल्मको रुपमा ‘साहो’ नै उभिएको छ । बक्स अफिस इन्डियाका अनुसार गत शुक्रबार ६ सेप्टेम्बरका दिन यो फिल्मले ३.५० करोडको कमाई गरेको थियो । अहिलेसम्मय साहोको हिन्दी भर्सनले बक्स अफिसमा ११८.५० करोड भन्दा बढीको व्यापार गरिसकेको छ ।
फिल्ममा ८० देखि ९० को दशकको ग्याङ्ग स्टार र उनीहरुको अपराधिक क्रियाकलापको कहानीलाई पर्दामा प्रस्तुत गरिएको छ । फिल्ममा अभिनेत्री श्रद्धाले आफ्नो स्पेसलाई राम्ररी निभाएकी छन् । प्रभाष र श्रद्धाको कुशल बोन्डिङलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ । साभार गरिएको।
सहुलियत कर्जा सुविधा ठूला उद्योगीले दिएको सार्वजनिक
सरकारकै कारण ग्रील व्यवसायीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान पाएनन् : अध्यक्ष कटुवाल
डोटेली भाकामा ‘मुई डोली भाग २’ सार्वजनिक
राजस्व सचिब ढुंगानामाथी खनिए व्यवसायीहरु : सस्ता नारा सरकारबाट आजै बन्द गरौ…(भिडियो सहित)